Waxa uu app-ku sameeyo
Fiidiyow Sharraxaya App-ka
Qoraalka 'Fiidiyow Sharraxaya App-ka'
App-ka Cudurka COVID-19 ee NHS waa qayb muhiim ah oo ka mid ah la dagaallanka cudurka fayraska korona.
Wuxuu hadda ku dhisan yahay tiknoolajiyadda ilaalinta asturnaanta ee shirkadaha Apple iyo Google.
App-ka ayaa gacan innaga siin doonta in aan si amaan ah ugu noolaano nolosheenna isaga oo ilaalinaya adiga iyo dadka kaleba.
Haddii degmada cinwaankaaga boostada ay noqoto mid halisteedu sarreyso, app-ka ayaa kula soo socodsiin doona - wuxuunna ku siin doonaa talo ku saabsan tallaabada aad qaadayso.
Oo haddii aad xiriir dhow la yeelato adeegsade kale oo soo sheegaya natiijo baaritaan ah in cudurka laga helay app-ka ayaa kuu soo diri doona digniin aan qofka magaciisa lagu sheegayn.
Iskaanka QR oo barnaamijka ku dhisan ayaa kuu oggolaanaya in aad goobaha u gasho si fudud oo degdeg ah.
Waxaad astaamahaaga ka hubin kartaa app-k oo haddii ay soo-jeediyaan in aad qabto cudurka korona fayraska, app-ku waa hab fudud oo la isku baari karo.
Xog kasta oo lala wadaago app-ka ayaa lagu hayaa telefoonkaaga.
Qofna ma oggaan doono cidda aad tahay iyo halka aad joogtid. Waxaad waqti kasta tirtiri kartaa app-ka iyo dhammaan xogta.
App-ka cusub ee Cudurka COVID-19 ee NHS waa habka ugu dhakhsiyaha badan ee aad ku arki karto haddii aad halis ugu jirto fayraska. Sida ugu dhakhsiyaha badan ee aad u oggaato, waa sida ugu degdegsan ee aad ugu digi karto una ilaalin karto kuwa aad jeceshahay. Maanta soo degso.
Daawo fiidiyowgayaga si aad war dheeraad ah uga hesho habka aan ku dhawrno sirtaada
Barnaamijka Soo bandhigidda app-ka NHS COVID-19 waa qayb ka mid ah baarista coronavirus-ka ballaaran (COVID-19) iyo la xiriiridda barnaamijka raadinta ee loo yaqaan NHS Test and Trace. App-ka ayaa loo adeegsan doonaa, oo ay weheliso raadinta xiriirinta dhaqameed, si loo ogeysiiyo isticmaaleyaasha haddii ay la xiriiraan qof mar dambe laga hilay shaybaarkiisa cudurka coronavirus.
App-ka wuxuu u oggolaanayaa dadka inay soo sheegaan astaamaha, dalbadaan baarista coronavirus, iska xaadirista meelaha lagu aaso iyadoo la iskaankayo.
App-ka wuxuu ka caawin doonaa NHS-ta inay fahanto haddii fayrasku ku fidaayo aag gaar ah, sidaa darteedna maamulada degmadu si dhaqso leh ayey uga jawaabi karaan joojinta inay sii fidaan oo ay badbaadiyaan nolosha.
Appku wuxuu sameeyaa tan isagoo ilaalinaya magaca qarsoon. Qofna, oo ay kujirto dawladda, ma ogaan doonto cidda ama meesha uu isticmaale gaar ah yahay.
Xiga : Muhiimadda Appku